Usebenzisa njani uphawu lokudibanisa kwiKhowudi yakho yeJava
Uphawu lokudibanisa sisixhobo esiguqukayo xa usenza inkqubo ngeJava. Inika ezinye iindlela ezahlukeneyo xa ubhala ikhowudi. KwiJava, unokwenza izinto ezimbini ezahlukeneyo ngophawu lokudibanisa:
Unokongeza amanani ngophawu lokudibanisa.
I-wellbutrin xl vs sr ukunciphisa umzimba
numberOfSheep = 2 + 5;
Unga concatenate imitya enophawu lokudibanisa.
Xa udibanisa imitya, uyazikrola kunye, enye emva kwenye. Umzekelo, intetho
'Barry' + ' ' + 'Burd'
ukukrwela kunyeUBarry, indawo engenanto, kunyeUmthwalo. Umtya omtsha okrunyiweyo (uyiqikelele)UBarry Burd.
anAccount.lastName = '  +  (char) (myRandom.nextInt(26) + 'A')  +  (char) (myRandom.nextInt(26) + 'a')  +  (char) (myRandom.nextInt(26) + 'a');
ineempawu ezininzi ezidityanisiweyo, kwaye ezinye zeempawu zokudibanisa zidibanisa izinto kunye. Into yokuqala ngumtya ongaziwayo ongenanto (). Le ntambo ingenanto ayibonakali, ke ayinakuze iphazamise ukubona kwakho into yesibini, eyesithathu, neyesine.
Ukuya kumtya ongenanto, inkqubo idibanisa into yesibini. Into yesibini lixabiso lentetho(itshathi) (myRandom.nextInt (26) + 'A'). Ibinzana linokubonakala linzima, kodwa ayisiyonto inkulu. Eli binzana limele unobumba omkhulu (nawuphi na unobumba omkhulu, oveliswe ngokungacwangciswanga).
I-clavamox 125 mg yezinja
Ukuya kumtya ongenanto kunye noonobumba abakhulu, inkqubo idibanisa into yesithathu. Into yesithathu lixabiso lentetho(itshathi) (myRandom.nextInt (26) + ‘a’). Eli binzana limele unobumba omncinci (nawuphi na unobumba omncinci, uveliswe ngokungacwangciswanga).
Kuzo zonke ezi zinto, inkqubo iyangqinelana nenye unobumba omncinci. Lilonke, unegama elinobumba abathathu. Ngolwazi oluthe kratya, bona ibha esecaleni ezayo.
Ingxeloibalance.balance = myRandom.nextInt (10000)yabelaintxabiso kuibhalansi. Kodwaibhalansiyikabinieyahlukileyo, hayi iintumahluko. Kulungile. Kwimeko enqabileyo yokuvumela, iJava ikuvumela ukuba unike i-intixabiso kwikabiniumahluko. Iziphumo zomsebenzi azimangalisi. Ukuba wabelaintIxabiso lama-8734 ukuya kwi-kabiniumahlukoibhalansi, ixabiso leibhalansiiba yi-8734.00.
Sebenzisa ikabiniChwetheza ukugcina isixa semali ngokubanzi ayilunganga.
oyile idosi oregano
I-rosuvastatin calcium 20 mg ithebhu
yintoni i-mao inhibitor
iziphumo ebezingalindelekanga ze-l-lysine
zingaphi i-advil onokuthi uzithathe